China 316L 316 abandayo iphuma engagqwali ikhoyili insimbi Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana 316L 316 ikhoyili yensimbi engagudluki ebandayo, 316 316L CRC
316 Ibanga elifanayo kusuka ezingeni elihlukile lezwe
Ingxenye #: 06Cr17Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 S31600 SUS316 1.4401
Ingxenye ye-316 Chemical Chemical ASTM A240:
C：≤0.08 ，Si ：≤0.75 Mnu ：.02.0 ， S ：≤0.03 ，P ：≤0.045, Khr ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
UMo: 2.0-3.0, N≤0.1
316 impahla yomshini i-ASTM A240:
Amandla eqine:> 515 Mpa
316L Ibanga elifanayo kusuka ezingeni elihlukile lezwe
316L Chemical Uphiko ASTM A240:
C：≤0.03 ，Si ：≤0.75 Mnu ：.02.0 ， S ：≤0.03 ，P ：≤0.045, Khr ：16.0～18.0 ，Ni ：10.0～14.0，
316L Impahla Yomshini ASTM A240:
Amandla eqine:> 485 Mpa
Amandla Okuhoxa:> 170 Mpa
Ikhoyili yensimbi engu-316 engagqwali egoqiwe Isicelo
Ukusetshenziswa okuyinhloko yimishini yokwenza iphepha nephepha, ukushintshanisa ukushisa, imishini yokudaya, imishini yokulungisa amafilimu, amapayipi, ukwakha izinto zangaphandle ezindaweni ezisogwini. ibuye isetshenziswe emkhakheni wama-valve we-solenoid, i-housings, izibopho, ibhola, umzimba we-valve, isihlalo, umuthi, isiqu njalonjalo.
316 insimbi engagqwali ezinye izici
Ukumelana ne-316 Corrosion kungcono kune-304 insimbi engagqwali, ku-pulp kanye nenqubo yokukhiqiza iphepha inokumelana okuhle nokugqwala. Futhi insimbi engagqwali engama-316 nayo iyamelana nokuguguleka kwezilwandle nomoya wezimboni onolaka.
Insimbi engagqwali engu-316 inokumelana okuhle kwe-oxidation ukuze isetshenziswe ngezikhathi ezingezansi kuka-871 ° C (1600 ° F) nokusetshenziswa okuqhubekayo ngaphezu kuka-927 ° C (1700 ° F). Kungcono ukungasebenzisi ngokuqhubekayo insimbi engagqwali engama-316 ebangeni elingama-427 ° C-857 ° C (800 ° F-1575 ° F), kepha insimbi engagqwali inakho ukumelana nokushisa okuhle lapho insimbi engagqwali engu-316 isetshenziswa ngokuqhubekayo ngaphandle kwaleli banga lokushisa. Ukusebenza kwezulu le-316L insimbi engagqwali kungcono kunensimbi engagqwali engu-316, etholakala ebangeni lokushisa elingenhla.
I-Annealing yenziwa ezingeni lokushisa ebangeni le-850-1050 ° C elandelwa ukufakwa ngokushesha okulandelwa ukupholisa okusheshayo. Insimbi engagqwali engu-316 ayikwazi ukuqina ngokwelashwa kokushisa.
Ukusebenza kokushisela insimbi engagqwali okungu-316
Insimbi engagqwali engama-316 enokusebenza okuhle kwe-welding. Zonke izindlela zokushisela ezijwayelekile zingasetshenziselwa ukushisela. Ukushisela kungasetshenziswa ngokwenhloso, ngokulandelana i-316Cb, 316L noma i-309Cb izinduku zokugcwalisa insimbi engagqwali noma ama-electrode wokushisela. Ukuze kutholwe ukumelana nokugqwala okungcono kakhulu, isigaba esinezinsimbi esinensimbi engagqwali engama-316 sidinga ukwengezwa ngemuva kokushisela. Uma kusetshenziswa insimbi engagqwali engu-316L, akudingeki ukunamathiselwa ngemuva kwe-weld
Langaphambilini Ikhoyili yensimbi engenazinsimbi engu-430 ebandayo
Olandelayo: 304DQ DDQ abandayo iphuma insimbi engagqwali ikhoyili